Alahady 16 Febroary 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 16 FEBROARY 2020 - Alahadin'ny Vondrona Manambatra ny Fanomezam-pahasoavana - VMFP
“fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny voa mety ho lò, fa tamin'ny tsy mety ho lò” : 1 Petera 1: 23
Ny fotoana androany dia natokana indrindra ho fiaraha-miombom-bavaka amin’ny VMFP na ny Vondrona Manambatra ny Fanomezam-Pahasoavana eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena. Ity no alahady faha-enina manaraka ny epifania ary ho antsika eto amin’ny sahan’ny FJKM manokana dia natao ho an’ny Tranom-bakoka sy ny Arsiva FJKM ity fotoana ity. Mbola ao anatin’ny fibanjinana ny lohahevitra hoe :MAHATOKY NY TENY VAVOLOMBELON’NY TOMPO” ihany koa isika .
Ny mpikambana ao amin’ny VMFP no nitantana sy nandrindra ny fanompoam-pivavahana. Araka izany dia ny filohan’ny rafitra Ratoa RAKOTOSON ANDRIANASY Fanja no nitarika ny fanompoam-pivavahana. Nanasa manokana ny mpitandrina RABEMANANTSOA Solofo izy ireo , hitory ny tenin’Andriamanitra, izay tsy iza fa ny filohan’ny Fikarohana sy ny Fandalinam-pinoana eo anivon’ny foibe FJKM na ny FFP.
Mialoha ny firosoana tamin’ny fanompoam-pivavahana dia nanatanteraka fianaran-kira aloha ny mpiankavin’ny finoana, izay tsy inona fa ny hira fanevan’ity rafitra VMFP ity , mitondra ny lohateny hoe “FANOMEZAM-PAHASOAVANA”. Ny filohan’izany rafitra izany ihany moa no namorona ny hira. Ny litorjia voalohany fampiasa eto anivon’ny sahan’ny FJKM no notanterahina.
Ny Salamo faha 149 : 1-4 no nentina niderana an’Andriamanitra: “Haleloia. Mihirà fihiram-baovao ho an’i Jehovah, Ny fiderana Azy eo amin’ny fiangonan’ny olona masina. Aoka ny Isiraely hifaly amin’ny Mpanao azy; Aoka ho finaritra amin’ny Mpanjakany ny zanak’i Ziona. Aoka hidera ny anarany amin’ny dihy izy Sy hankalaza Azy amin’ny ampongatapaka sy ny lokanga. Fa sitrak’i Jehovah ny olony; Ravahany famonjena ny mpandefitra. Amen”.
Natao ny hira FF13 “ Mihirà fihiram-baovao” ka rehefa izany dia nanao ny vavaka fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra ny mpitarika . Izao no vavaka nentina niderana ilay Tompo Andriamanintsika tamin’izany :”Endrey ny hamaroan’ny asanao Jehovah o! . Fahendrena no nanaovanao azy rehetra.Eniky ny zavatra nataonao ny tany, koa dia midera, mankalaza, manome voninahitra Anao izahay ry Ray tsara indrindra o!. Ny fahasoavanao no naha-toy izao anay. Koa indreto izahay, vory etoamin’izao tempolinao masina izao. Misaotra anao satria mbola nohavaozinao indray maka indray ny famindram-ponao ka izany no tsy nahalany ritra anay. Ny famindramponao hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay sy ny fahamarinanao amin’ny taranaka rehetra eto amin’izao Fiangonana izao, dia aminay rehetra izay misitraka ny fanomezam-pahasoavana avy aminao. Raiso Tompo ny vavakay ho fisaorana sy fiderana Anao , eran-tsaina, eram-po, eram-panahy noho ny amin’I Jesoa Kristy zokinay. Amen!”.
Izao no sitrapon’Andriamanitra nambara tamin’ny Fiangonana : 3 Jaona 5-6; 1 Timoty 4 : 14 ; 1 Petera 4 : 10 : “Ry malala, manao asa mahatoky ianao na amin’inona na amin’inona ataonao amin’ireo rahalahy ireo, na dia vahiny aza izy, izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan’ny fiangonana; dia ho soa no ataonao, raha mamoaka azy koa araka izay miendrika hatao noho ny amin’Andriamanitra ianao; Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomena anao tamin’ny faminaniana sy ny fametrahan-tànan’ny loholona; Samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samy hafa izay an’Andriamanitra. Amen!”
Rehefa vita izany dia nohirain’ny fiangonaan ny hira FF 16: 2 “ Ny mpianatry ny Tompo nasainy nifanompo”.
Tsy misy marina eo antrehan’Andriamanitra isika manoloana izany sitrapon’Andriamanitra izany. Koa andeha hifona sy hametraka ny fahotantsika eo am-pototry ny hazo fijalian’I kristy isika satria Izy irery ihany no hanafaka antsika tsy ho andevon’ny ota intsony.
Izao no vavaka fiaiken-keloky ny Fiangonana: “Indreto izahay, Jehovah Andriamanitray o! ,menatra sy mangaigay raha nandre ny sitraponao. Tsy tanteraka izahay , ary na dia efa renay im-betsaka aza ny sitraponao dia sady tsy nankato no tsy nanaja izany izahay . Raha hoy Ianao hoe : soa no ataonao amin’ny rahalahinao; indrisy Tompo o! fa tia tena izahay fa tsy nitia ny namanay tahaka ny tenanay. Nanambara ny teninao fa tokony hitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay nomenao anay izahay. Indrisy Ray o! fa toa tsy sarobidy aminay akory izany fa notsinontsinoavinay.Hoy Ianao hoe : samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo; mbola diso indray maka ihany koa izahay satria te ho tompo aza izahay, ka manandran-tena fa tsy mifanompo mba hampandroso ny hafa sy hampandroso ny fiangonanao. Mifona Aminao izahay Andriamanitra o!. Mitondra ny tsy fahamarinanay sy ny tsy fahatanterahanay eto anatrehanao sy manoloana ny namanay . Meteza Ray o! hamafa ny helokay. Atongilano ny sofinao Jehovah o! ka valio izahay fa ory sy malahelo. Arvy ny fanahinay fa masina izahay satria zanakao. Vonjeo izahay Andriamanitra o! dia izahay izay matoky Anao koa mamindrà fo aminay, mamelà ny helokay noho ny asan’ny Fanahy Masinao amin’ny alalan’I Jesoa Kristy Tomponay. Amen!”
Taorian’ny vavaka dia noredonin’ny mpianakavin’ny finoana ny HIRA FF42 : 1,3 “moa misy va ety”
Ny Andriamanintsika dia avo fipetraka fa iva fijery, ary tsy mba lalodalovana ny sofiny fa mahare. Mitsena izay mifaly manao ny marina Jehovah, dia izay mahatsiaro Azy amin’ny lalany. Fa efa miseho ny fahasoavan’Andriamanitra ho famonjena ny olona rehetra sy ny fitiavaa ny olona dia tsy avy tamin’ny asan’ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famindrampo kosa no hamonjeny antsika tamin’ny fanavaozan’ny fanahy masina izay nahidiny betsaka tamintsika tamin’ny alalan’I Jesoa Kristy mpamonjy antsika mba ho hamarinina amin’ny fahasoavany isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay . Ho anao izay nibebaka marina tokoa dia raiso ny famelan-keloka izay hambaran’ny Tompo aminao (Titosy 2 : 11 / Titosy 3 : 4-7) : “ Fa efa miseho ny fahasoavan’Andriamanitra, izay famonjena ny olona rehetra, Fa rehefa niseho ny fahamoram-panahin’Andriamanitra, Mpamonjy antsika, sy ny fitiavany ny olona, dia tsy avy tamin’ny asa amin’ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika, tamin’ny fanasan’ny fiterahana indray sy ny fanavaozan’ny Fanahy Masina,Izay naidiny betsaka tamintsika tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy, Mpamonjy antsika,mba hohamarinina amin’ny fahasoavany isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Amen!”
Ny Hira FF 37 : 2 “Fa tsy misy hafaliana” no nandraisan’ny Fiangonana izao famelan-keloka izao ary taorian’izany dia nanatanteraka ny FANEKEM-PINOANA faha-telo ny Fiangonana .
Ratoa ANDRIAMBELOSON Tifanny no nanatontosa izany .Nanao vavaka izy ka nangataka amin’ny Tompo ny hananan’ny ankizy ny fitadidiana ny tenin’Andriamanitra sy mba tsy ho very maina izao fotoana izao . Ny Salamo faha 119 : 105 : “fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny làlako ny teninao” no nitondrany ny hafatra ho an’ny mpianakavin’ny finoana sy ho tenin’Andriamanitra ho tadidiana amin’ity herinadro ity.
Nisy ny tantara kely nentina nanamafy izao hafatra izao ary avy eo dia nataon’ny mpikambana ao amin’ny sampan sekoly alahady ny hira : 759 : 1 “ Ny Saikazan’ny tanora”
Avy eo dia nanatanteraka ny anjara hirany ny Sampana STK tamin’ny alalan’ny hira hoe : “Antso ho anao”
Atoa ANDRIANARIVO JAOSOA no nanatanteraka izany ka ny teny ao amin’ny Romana 6: 23b izay teny filamatra rahateo ho an’ity rafitra ity no nentiny niarahaba ny mpiakavan’ny finoana.
Teo ny asa anatiny izay nahitana ny famoahana ny lahatsoratra tamin’ny gazety TAFA nanehoana ireo fanomezam-pahasoavana tamin’ny mpianakavin’ny finoana. Santionany tamin’izany ny lahatsoratra mikasika ny fambolena ara-natoraly, ny fahasalaman’ny biby fiompy, ny fikojana ny fiara, ny hira sy ny fahasalamana , ne vehivavy sambatra sady ambinina ets… Teo ny fandraisana anjara tamin’ny alim-bavaka paska, ny fotoana’ny fetin’ny ray sy ny fetin’ny reny ary ny fandraisana anjara tamin’ireo famangian’ny Fiangonana. Teo amin’ny asa ivelany dia voamarika manokana ny famangiana sy ny fanampiana ny TPM any Manditsara, teo ny asa fanatsarana ny sekoly FJKM teny Ambohidratrimo. Ny fanaovana ny Tafika masina niarahana amin’ny AFF, ny famangiana ny toby eny Tangaina. Misy ny asa miandry toy ny “mise à jour base de données” ny listry ny mpianakavin’ny finoana manana ny fanomezam-pahasoavana.
Nanatanteraka ny herinandrom-bokatra, ny rafitra tamin’ity herinandro ity androany alahady no ivon’izany. Nisy moa ny famelabelaran-kevitra notanterahina nandriatra iny herinandro iny ka singanina amin’izany ireto lohahevitra ireto : “Mankalazà an’Andriamanitra noho ny fanomezam-pahasoavana nomeny” , “ Ny tokatrano vanona sy sambatra”, “ ny mpivady Mankato”
Taorian’ny tatitra dia nataon’ny mpikambana VMFP ,ny hira faneva : “FANOMEZAM-PAHASOAVANA” ary dia niroso tamin’ny raharahan’ny fiangonana, ny mpianakavin’ny Finoana.
Ny biraom-piangonana RAZAFIMAHARO Mamy no nanatanteraka ny famakiana ireo raharahan’ny Fiangonana .
Hotanterahina ny Alakamisy 20 febroary 2020 eny amin’ny FJKM Ambohinomena Fahasoavana ny ny mpihevi-draharaha sy ny komity lehiben’ny SAFIF SPAA10.
Hotanterahina ny alakamisy 27 febroary 2020 ny komity lehiben’ny Sampana VVM SPAA10 ao amin’ny Fiangonana FJKM Ambalavao Isotry.
Hotanterahina eny amin’ny FJKM Paroisse Internationale ny fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy ny 23 febroary 2020 izao.
Hisy ny hakatoky ny fandraisana ny Alahady 23 febroary 2020.
Ny fifampiarahabanan’ny RFF dia hotanterahina ny Asabotsy faha 22 febroary 2020 eny Ivato , amin’ny tananan’I Ramahandry Faly mivady.
Ny fifampiarahaban’ny VVM sy ny rantsana fanantenana dia ny Alahady 23 febroary ao amin’ny Akany Rainimamonjy.
Mitohy ny hetsika FITO ANTOKA amin’ity volana febroary ity amin’ireto faritra ireto : (Afovoany) : Ambatonakanga, Ambatovinaky; (ATSIMO) Anosizato, Fenoarivo ; (AVARATRA) : Analamahitsy, ambohitrarahaba; (ATSINANANA) Ambaranjana; (ANDREFANA ) – Isoraka, Tsaralalana.
NY TENIN’NY MPITANDRINA
Nisaotra ny Tompo noho ity fotoana ity ny mpitandrina.
Nankasitraka ny birao sy komity sy ny mpikambana VMFP.
Niantso ny fiangonana amin’ny fidirana ho SETELA sy FITELA fa efa manomboka ny fampianarana.
Nanentana ny fiangonana amin’ny fanatrehana ny fianarana ny filazantsaran’I Jaona amin’ny zoma izao eto am-piangonana.
Tamin’ity androany ity dia niarahaba manokana antatoa FANAMBINANA JAOARIVELO ny mpitandrina satria tonga niombom-bavaka teto amin’ny fiangonana izy. Izy moa no Katekista manao ny asan’ny evanjelistra any Bevoay.
Ny biraom-piangonana Razafindrabe BAM John no nanolotra izany ka ny Salamo 122: 1 no nentiny niarahaba ny Fiangonana.;Ireto Ireo hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana : FFPM 549 : 1 / FF 14: 2 / FF 4: 1 / FFPM 171 : 1 / FFPM 171 : 2 .
Tao ny renim-pianakaviana nisaotra sy nidera aorta ny Tompon’Andriamanitra fa nahita asa sy afaka fanadinana ny zanany ary ny vadiny sitrana tamin’ny aretina nandazo.
Tao ny nisotra ny Tompo ka manavao ny fanoloran-tenany amin’ny asa fanompoana
Nisy ny renim-pianakaviana , mangataka vavaka mba ho salama tsara sy ho teraka soa amantsara ary hotahian’I Tompo ny fanambadiany ary hotahian’I Tompo amin’ny asa fitadiavana.
Tao ny mpanompon’Andriamanitra nahatsapa ny herin’Andriamanitra mitantana azy nandriatra ny olana izay nosedrainy tao am-piasana. Mangataka vavaka amin’ny fiangonana mna hotahian’Andriamanitra ny asa fivelomany, ny ankohonany ary ny asa fanompoana izay tanterahany.
Nisy ny nangataka ho an’ny zokiny izay handalo fandidiana
Misy ny olona mametraka ny diany amin’ny Tompo noho ny asa ataony any amin’ny faritany.
Tao ny nangataka amin’ny Tompo ho fiarovana amin’ny asa sy ny fianaran’ny ankizy ary ny olana mianjady amin’izy ireo.
Rehefa tontosa ireo rehetra ireo dia niroso tamin’ny fanatanterahana ny rakitra sy ny fanomezana , ny Fiangonana. Ny hira FF 15: 1 “ Tompo malalako” no nentin’ny Fiangonana nanavao ny fanoloran-tena ho an’Andriamanitra sy nanolorana izao rakitra izao ho an’Andriamanitra. Hira FF 24 : 1 “ Mihaingà mazotoa “
FITSENANA NY TENIN’NY SORATRA MASINA :
Ireto no perikopa voalahatra hovakiana androany : Salamo 19 : 7 -11 /Lioka 5 : 1-7 / 1 Petera 1: 22-25.Ratoa Fara RAHARONORO no nitari-bavaka mialoha ny Soratra Masina, RANAIVO Hasina no namaky ny testamenta taloha ary RAKOTONARIVO Sitraka no namaky ny filazantsara sy ny Epistily.
Mialoha ny nitoriana ny tenin’Andriamanitra dia mbola nohitraina ny hira FF 10 : 2
Araka ny nambara tetsy aloha dia ny mpitandrina RABEMANANTSOA Solofo no nitory ny tenin’Andriamanitra. Teo am-boalohany dia niarahaba ny Fiangonana izy ary nanambara ny fifaliany , mamaly ny antson’ny VMFP.
Ny 1 Petera 1: 22-25 no nanompanana ny hafatry ny tenin’ny Soratra Masina. Nambara ary fa raha ity perikopa ity no jerena dia maneho fa MANANA FAHAFAHANA HANOVA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Misy zavatra roa ao an-tsain’I Petera raha mandikina izao perikopa izao isika.
Ny voalohany dia raha mijery mantsy isika ny fiazantsaran’I Marka 4 izay mikasika ny fanoharana ny amin’ny mpamafy dia mazava ao fa ny MPAMAFY dia MPAMAFY ny TENY. Io teny io dia TENY VELONA, misy aina sy manome fiainana. Izany ary no hilazana fa mahavita manova ny tenin’Andriamanitra. Hoy ny Ohabolana : ny tenin’Andriamanitra dia aina ho an’izay mahazo azy ary fahasalamana ho an’ny nofo rehetra.
Ny faharoa kosa , raha mijery ny Isaia 40: 6-8 dia mahita ny fanoharana ny olona amin’ny ahitra izany hoe zavatra tsy mateza fa mandalo .Isika olombelona dia ambaran’ny Soratra Masina fa zavatra tsy maharitra, tsinontsinona ny zanak’olombelona.Ny anarana hoe ABELA ohatra dia fofon’aina no dikany, na entona, mandalo vetivety dia tsy hita intsony.
Mampahatsiahy kosa anefa I Petera fa na eo aza izany maha-tsinontsinona ny zanak’olombelona izany dia mahery ny tenin’Andriamanitra ka afaka mitondra zava-baovao ho an’ny olombelona.
Misy endrika samihafa azontsika handraisana izany tenin’Andriamanitra izany . Ny tenin’Andriamanitra dia raisina amin’ny alalan’ny toriteny sy ny fampianarana, ny famakiana ny Soratra Masina. Ny tenin’andriamanitra izay raisintsika ihany koa dia tsy iza fa I Jesoa Kristy tonga nofo. Amin’ny fomba rehetra sy samihafa mba ahazoan’ny olona mandray ny tenin’Andriamanitra koa araka izany dia tsy misy olona afaka hilaza intsony na iza na iza fa tsy mbola nandre ny tenin’Andrimanitra eny fan a dia ny tsy mivavaka aza.
Tadidio ary fa ny tenin’Andriamanitra dia velona , omena ny olona ary mitondra fanovana. Tsy izay rehetra mandre anefa no mandray ny teny ka mahatonga fanovana ao anatiny ilay tenin’Andriamanitra fa izay mandray ny teny ihany. Ny tenin’Andriamanitra dia zaraina, haparitaka omena ny rehetra saingy tsy ny rehetra no afaka mandray.
Miantefa amintsika izany tenin’Andriamanitra izany koa raiso sy vakio ary halalino ny tenin’Andriamanitra fa manana fahefana manova ny olona izany ka hitondra zava-baovao ho an’ny olona.
Nanatanteraka ny Hirany ny Hasin’ny Famonjena dia ny hira mitondra ny lohateny hoe : “Ny teninao no toky” izay hira noforonin’I RAKOTOARIVONY Noel
Nambara tamin’izany vavaka izany ary fa Ny tenin’Andriamanitra dia maharitra mandrakizay. Nanao vavaka ho an’ny fiangonana sy ny mpitondra fivavahana rehetra ny mpitandrina.
Nivavaka ho an’ny tranom-bakoka sy ny arsiva FJKM ary nitondra am-bavaka ho an’ny mpitandrina nitory ny tenin’Andriamanitra sy ny akohonany, nivavaka ho an’ny katekista any Bevoay ary nivavaka ho an’ny VMFP. Tsy adino ny nitondra am-bavaka ireo mpianakavin’ny finoana nanao voady sy raki-pisaorana ho an’ny Tompo ary izany moa dia nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.
Natao ny hira FF3: 1 ary rehefa izany dia notononina ny tondrozotra 2020 mialoha ny nanatanterahin’ny mpitandrina ny tsodrano.
Ny hira FF 3 and. 2 no namaranana izao fanompoam-pivavahana izao mialoha ny fanambaràna ny trinite masina.
FANAMAFISAM-PEO : HARENTSOA Rova
ORGA : RANAIVOSON Jacky
NAKA NY FEO : RANAIVOSON Joel
Nandray an-tsoratra : RABAKO Tovohery Naka sary : RAJAOFETRA Seta